Maamulka Juventus oo war cad kasoo saaray mustaqbalka Cristiano Ronaldo & Xilliga uu kasoo laabanayo fasaxiisa xagaaga – Gool FM
(Turin) 25 Luulyo 2021. Madaxweyne ku xigeenka kooxda Juventus ee Pavel Nedved ayaa xalay ka hadlay mustaqbalka Cristiano Ronaldo xilli Kabtank Portugal si aad ah loola xiriirinayo inuu ka dhaqaaqayo Turin.
Nedved ayaa sheegay inuu Ronaldo fasaxiisa xagaaga kasoo laabanayo Isniinta sidoo kalena uu xilli ciyaareedka soo socda sii joogi doono Allianz Stadium xilli qandaraaskiisa uu dhici doono xagaaga dambe sidoo kalena aysan jirin wada-xaajood la sheegay inuu u socdo labada dhinac si heshiiska loogu cusbooneysiiyo.
“Ronaldo waxaa loo yeeray 26-ka July, wuxuu imaan doonaa Isniinta wuuna nala joogi doona” ayuu yiri madaxwena ku xigeenka Bianconeri.
36-sano jirkan ayaa Juventus kaga soo biiray kooxda Real Madrid xagaagii 2018, waxaana uu noqday laacibka sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaaray inuu 100 gool u dhaliyo Juve.
Kylian Mbappe oo u sheegay Mauricio Pochettino qorshaha mustaqbalkiisa Paris Saint-Germain